Ciidamada taabacsan DKMG ah oo la wareegay deegaanno hoos-taga Dhoobley – SBC
Ciidamada taabacsan DKMG ah oo la wareegay deegaanno hoos-taga Dhoobley
Ciidammo taabacsan Dowladda Soomaaliya ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanno 40-km bari kaga beegan Dhoobley oo lagu kala magacaabo Jaldeyste iyo Haawina, kuwaasoo ay horay gacanta ugu haysay Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin.
Deegaannadan ayaa la sheegay inaysan ka dhicin wax dagaal ah iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay gudaha u galeen, balse xoogagga Xarrakatul Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka billaabay deegaanka taabto oo 10-km u jira Dhoobley.
Saraakiisha DKMG ah ee ku sugan deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada hoose ayaa saxaafada u xaqiijiyay inay dagaal la’aan kula wareegeen deegaannadan ka tirsan magaalada Dhoobley oo ay qabsadeen toddobaadyo ka hor.
Xarrakatul Shabaab oo ka talinaysay deegaannada maanta ay sida nabadda ah kula wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaan ka hadlin la wareegidda DKMG ah ay la wareegtay, waxaase tan iyo markii laga qabaday Dhoobley ay xoogagga Xarrakadu ku sugnaayeen deegaanno ka tirsan Dhoobley.
Dhanka kale, wararka laga helayo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in ganacsigii uga tegi jiray degmadaas dhinaca Jubbooyinka la xayiray, iyadoo wax ganacsi ah aysan hadda geli karin deegaankaas oo ay ku sugan yihiin cidamada dowladda Soomaaliya.
Shacabkii ku noolaa deegaanka Dhoobley ayaa horay uga barakacay kaddib markii ay ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa Xarrakatul Shabaab dhowr jeer ku hardameen iyadoo ugu dambeyn ay magaaladaas gacanta ku gashay DKMG ah.